Tanora Stalinista manimba ny endriky ny tsangambato vaovaon’ny ‘mpamadika’ Aleksandr Solzhenitsyn · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2015 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, বাংলা, Français, Ελληνικά, Български, Español, English
Lehilahy iray hita ho Maxim Shinkarenko manantona sora-baventy mivaky hoe “JODASY” amin'ny tsangambato vaovao an'i Aleksandr Solzhenitsyn. Pikantsary: YouTube.
Zatovolahy iray monina ao Vladivostok no nanimba ny endriky ny tsangambato vaovaon'ilay mpanoratra nahazo ny loka Nobel antsoina hoe Aleksandr Solzhenitsyn, tamin'ny fanantonana sora-baventy mivaky hoe “JODASY” tamin'ny sorok'i Solzhenitsyn. Tamin'ny 6 Septambra, ny ampitson'ny namoahan'ny tanàna ilay tsangambato, dia naka an-dahatsary ny tenany teo ankilan'ilay tsangambato ilay lehilahy, ary tamin'izany no nanazavany tamin'ny fakantsary fa “mpamadika” sady “tsy tia Rosiana” i Solzhenitsyn.
Hita endrika ho i Maxim Shinkarenko, Stalinista 28 taona monina ao an-toerana. Ao amin'ny pejiny Vkontakte i Shinkarenko no naneho ny fahalianany amin'ny fiara mifono vy, ny tambajotran'ny televizionam-panjakana rosiana RT, ary ny Antoko Komonista.
Ao amin'ny lahatsary i Shinkarenko mitaraina fa nangataka amin'ny manampahefanan'ny tanàna izy tamin'ny herintaona hanangana tsangambaton'i Josefa Stalinina, ho fanomezam-boninahitra ny faha-70 taona nandresen'i Firaisana Sovietika tamin'ny ady lehibe faharoa, saingy nolavina ny fangatahany. Araka ny manampahefana, Shinkarenko no miteny, dia tsy misy toerana ao Vladivostok mety hananganana ny tsangambato vaovaon'i Stalinina. Nikiry anefa i Shinkarenko fa tokony aleon'ny tanàna tsangambato ho an'i Stalinina no atsangana fa tsy ity vao najoro ho an'i Solzhenitsyn ity. Nanonona fitsapan-kevitra an-tsersera iray nalaina kisendrsendra aza izy entina ampisehoana fa ny 75 isan-jaton'ireo nametraka ny safidiny no milaza fa “tsy voatery” atsangana ilay tsangambato vaovao ho an'i Solzhenitsyn.
Nilaza ny polisin'i Vladivostok fa eo ampanaovana famotorana ny fanimbana ny tsangambaton'i Solzhenitsyn ry zareo hamaritra raha misy ny heloka bevava tontosa tamin'izany.